12 Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 24/05/2021)
Site na ihe nkiri kachasị amasị onye ọ bụla nke Europe “ugwu nta na ada na uda egwu”. N'ezie ndị na-esonụ 12 ugwu ga-eme gi egwu, obi gi ga-etekwa egwu. Site na Alps na Pyrenees a ma ama rue zoro ezo bara nnukwu uru nke Czech Republic, sonyere anyi na ibugo onu ihe na 12 kasị ọmarịcha ugwu na Europe.
1. Ugwu Matterhorn Na Switzerland
Site na Gornergat ruo ugwu Rothorn, Matterhorn nwere ike ịmasị n'ebe ọ bụla na Zermatt. Matterhorn snowy okpu na zita, mepụta ihe ngosi ugwu mara mma.
N'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge oyi, Matterhorn a ma ama bụ ebe ezumike dị ịtụnanya na ugwu. Nwere ike ịchọta Matterhorn na Switzerland Alps ma họrọ n'etiti na-agbago elu 4,478 mita, ịga njem n'okporo ụzọ kachasị ewu ewu site na Zermatt site na Hornli Hut.
Matterhorn ibugo onu bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọwụwa hikes na Europe, miri emi na ahihia ahihia Switzerland. Ya mere, ị ga-enwe ọtụtụ ntụpọ maka ọmarịcha ọnyà na ijide ume gị mgbe ị na-enwe mmasị na ịma mma nke okike.
2. Jungfrau Na Lauterbrunnen Ndagwurugwu, Switzerland
Na ndagwurugwu Lauterbrunnen mara mma na ala nke 72 nsụda mmiri, ị ga-ahụ ugwu ugwu Jungfrau dị ebube. na 4,158 mita, Jungfrau bụ ugwu kasị elu na Bernese Alps.
ọzọ, ị nwere ike họrọ ịrị elu ma ọ bụ na-enwe kediegwu Jungfrau ugwu echiche si kasị elu ụgbọ okporo ígwè na Europe. Site n'otu akụkụ Mittelland ruo Vosges, na glacier Aletsch dị n'akụkụ nke ọzọ gị, nnọọ breathtaking.
Lucerne na Lauterbrunnen nwere ụgbọ oloko
Jaa na Lauterbrunnen jiri ụgbọ oloko
Lucerne jikọtara ya na ụgbọ oloko
Zurich jikọtara ya na ụgbọ oloko
3. Grossglockner Na East Tyrol, Austria
Ugwu Grossglockner kachasị elu gbara ya gburugburu 266 obere ọnụ na ihe a na-akpọ ụlọ Austria. Ugwu a na-emepụta otu n'ime echiche ugwu dị egwu na Europe. Grossglockner guzo ogologo na 3,798 mita, na Grossenediger na 3,666 mita, na-eke otu n'ime ihe ndị kasị ọmarịcha ugwu echiche na Austria.
Will ga-ahụ ndị a 2 Refeyim na Hohe Tauren National park. Ebe i nwere ike ịga igwe kwụ otu ebe, hiking ma ọ bụ ịrị ugwu. Zọ a ị nwere ike ịmasị ọmarịcha echiche site n'akụkụ ọ bụla.
Vienna gaa Landeck Ischgl Na Trainzụ
Munich na Landeck Ischgl Na Traingbọ oloko
Salzburg na Landeck Ischgl na ụgbọ oloko
Zurich gaa Landeck Ischgl na ụgbọ oloko
4. Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe: High Dachstein Na Austria
Ugwu nke abụọ kachasị elu n’Austria bụ Hoher Dachstein, emi odude ke ediye obio Halstatt. Hoher Dachstein na-enye ugwu kachasị mma na ọdọ mmiri na oge oyi na ọkọchị. N’oge ọkọchị, ị ga-enwe mmasị na ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ ma na-eto eto karst ugwu. na oyi, gaa na-egwu ski site na elu ugwu.
Otú ọ dị, ihe ndị mara mma ugwu echiche na Hallstatt ga-abụ na 5 Isi mkpịsị aka nke Lake Hallstatt. Ọ bụrụ na ị na-eleta site na Eprel ruo Septemba, yi akwa oyi akwa oyi akwa, ebe ọ bụ na ọ ka nwere ike ịgba snoo na oyi n’oge a n’afọ. Nwere ike iru echiche a dị ịtụnanya site na ụgbọ ala ụgbọ mmiri belụsọ ma ị na-ahọrọ ịgagharị elu maka ahụmịhe na-akwụghachi ụgwọ ma na-atọ ụtọ.
Munich na Hallstatt Na Traingbọ oloko
Innsbruck na ụgbọ oloko na Hallstatt
Passau na Hall
Rosenheim na ụgbọ oloko na Hallstatt
5. Chamonix-Mont-Blanc. Mbara, France
Chamonix bụ ugwu kachasị elu na Alps. dị nnọọ 15 nkeji si n'ókè, Chamonix bụ ọmarịcha oyi. Ebe a, ị ga-blown pụọ na ọmarịcha echiche nke Mont Blanc.
Nwere ike ime ụgbọ oloko Mont Blanc, ma ọ bụ nwee mmasị na ọmarịcha echiche sitere na ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na obodo Chamonix. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịga Aiguille du Midi ma ọ bụ Mer du Glace. Ihe ọ bụla ị họọrọ, na breathtaking ugwu echiche nke onye kasị ọmarịcha ugwu na France ga-eso gị n'ebe nile.
6. Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe: Ndị Pyrenees
Ọmarịcha Pyrenees na-enye echiche ugwu kachasị mma. Ugwu asaa ahụ dị na France, Nkwupụta, ndị Jura, Central Central, Armorican Massif, na Corsican Massif.
Ugwu a dị oke oke nke na ị ga-esi n'oké Osimiri Atlantic gbagoo n'oké osimiri Mediterenian. Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ileta ọmarịcha obodo ochie, mana ị ga-enwe ohere na-enweghị atụ ị ga-eji na-enwe mmasị na ebube eke ọzọ. Ihe ịtụnanya a magburu onwe ya Grande Cascade de Gavarnie ma ọ bụ Gavarnie nsụda mmiri. Na dobe nke 422 mita, ọ bụ nsụda mmiri kacha elu na Europe.
Ya mere, eserese gị ga-abụ nke National Geographic zuru oke.
7. Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe: Val Thorens Na France
Elu na 2300 mita na French Alps, the Val Thorens snowy ugwu bụ ndị kasị mma ugwu ke ini etuep. Mia slopi, na-enwe iko kọko ọkụ ọkụ n'akụkụ ọkụ, ma ọ bụ ịnụ ụtọ echiche ndị ahụ site na ụgbọ ala USB, nlegharị anya bụ ihe na-akpali akpali.
Otú ọ dị, mgbe ọtụtụ na-aga Val Thorens maka ski, ọ dị ezigbo mma n'oge ọ bụla ọzọ. Ndagwurugwu Tarentaise jupụtara n'ụlọ ndị mara mma, ala ahịhịa juru, na osimiri Isere, na ugwu Val Thorens n'azụ, mepụta ọmarịcha mma iji nwee mmasị n'afọ niile.
8. Ndị Dolomites Na Italytali
Mgbe ị nwere ike ịhọrọ 7 ele ihe, ebe a mara mma n'ezie na odida obodo. Ugwu Dolomites dị na Southern Italy, bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma na Europe. Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na njem njem n'ụwa.
Nwere ike ịhọrọ ịmasị ndị Dolomit na njem ụbọchị site na Bolzano, ma ọ bụ na gburugburu nke njem 20-kilomita. Ihe omume, picnic na foto tụrụ, na hiking ụzọ ụkwụ, enweghị njedebe. Ka ihu ya niile, echiche ndị ahụ dị nnọọ mma, n'oge ọ bụla na njem gị.
Maka ebumnuche niile edepụtara n'elu, na Dolomites bụ ezigbo ebe maka ezumike na Italian ugwu.
9. Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe: Ugwu Snowdon Na Wales
Mount Snowdon mara oke mma nke na ọ bụghị ihe ijuanya na ọ nwere ngwa nke ya. Snowdon dị na Wales, na mgbe a 6-8 awa ibugo onu, i nwere ike na-enwe mmasị na pụtara echiche nke Snowdonia, Anglesey, Pembrokeshire, na Ireland.
Na mgbakwunye, site na elu nke 1085 mita, ị ga-enwe ike lee ọdọ mmiri niile mara mma. Ọmụmaatụ, Osimiri Cwellyn na Mynydd Mawr na-enye echiche dị egwu na njedebe ọdọ ọdọ Cwellyn.
10. Adrspach-Teplice Na Czech Republic
A maara Czech Republic maka Prague mara mma. Ọ bụ mmadụ ole na ole maara banyere ọmarịcha Bohemia na obodo nta, Adrspach-Teplice. Adrspach dị nso na ókèala Polish ma kwesiri ebe ịnọ Ihe ịtụnanya dị ebube nke Europe.
Adrspach-Teplice bụ obodo wuru n’etiti okwute, na-ewu ogologo, nwere labyrinth, mmiri oroma, na ụzọ ụkwụ. Achọpụtara ebe a na-adọrọ mmasị naanị n'ime 1824. Kemgbe ahụ bụ ebe pụrụ iche maka ndị njem na-achọ ihe pụrụ iche.
Ebe a, i nwere ike ịga ije akaghị nzọ ụkwụ, site n'ọnụ ụzọ ámá Gothic na ụzọ nzuzo. Ọ dịghị ihe dị ka ịmasị usoro nkume ndị dị ịtụnanya sitere n'ime wee rute ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ. Ebe obu na you gha eje ije n’ime oke okwute ndia, ọ kacha mma ileta n'oge ọkọchị, mb dayse ubọchi di ogologo ma ọtutu ìhè di.
11. Mpaghara Mullerthal Na Luxembourg
Na ụfọdụ n'ime echiche kachasị mma na Europe, ugwu Mullerthal di na Luxembourg na-enye uzo eji egwu egwu na ebe ihe omimi di omimi zoro ezo. Ka ị na-abanye n'oké ọhịa, gafere ọdọ mmiri na iyi, ugwu okwute di ndu, ị ga-achọpụta na ị bara n'ime akụkọ ifo ụmụaka.
Mpaghara Mullerthal nwere ụfọdụ ọdịdị ala na echiche pụrụ iche na Europe. Leslọ, abaitiat, àkwà mmiri, na olulu mmiri, enwere echiche mara mma ebe ọ bụla ị na-ele anya. N'ihi ya, hiking ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè, ijide n'aka na ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole, iji nwee mmasị n'ọmarịcha echiche ugwu nke Mullerthal.
Luxembourg na Brussels Na A Train
Iji ụgbọ oloko na Antwerp na Luxembourg
Iji Metz gaa Luxembourg
12. Ọtụtụ Ugwu Mara mma Na Europe: Stanserhorn, Switzerland
Ugwu snowy, ugwu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ọmarịcha ụlọ ndị mara mma dị na ndagwurugwu, echiche sitere na Stanserhorn bụ ndị kacha hụ n'anya. Ọmarịcha ugwu Stanserhorn bụ naanị 20 nkeji si Lucern jiri ụgbọ oloko ma mee njem ụbọchị dị ebube ọmarịcha Switzerland.
N'ebe a, ị nwere ike iburu ụgbọ ala ụgbọ elu gaa n'elu ugwu maka echiche panoramic dị egwu nke Switzerland Alps na ọdọ mmiri. Greatzọ ọzọ dị mma iji nwee mmasị na echiche ugwu ugwu Stanserhorn bụ site na iburu a ntụpọ picnic. N'ụzọ dị otú a, ị ga-anọ ụbọchị ahụ izu ike na iku ume na ịma mma na Alps’ ikuku ohuru.
Zurich na ụgbọ oloko na Lucerne
Bern ka jiri ụgbọ oloko gaa Lucerne
Geneva na Lucerne nwere ụgbọ oloko
Konstanz na Lucerne nwere ụgbọ oloko
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ezumike gị na 12 kasị ọmarịcha ugwu na Europe ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “12 Ọtụtụ mara mma Mountains Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2Fየሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Bestnaturereservesineurope MountainRange Mountains Ugwu MountainViews Mara mma Ugwu ugwu Nlele